ဒေါင်းနဲ့ ရှုတင်က အမှတ်တရပုံလေးတစ်ပုံ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ဖွေးဖွေး ⋆ The Moon
ဒေါင်းနဲ့ ရှုတင်က အမှတ်တရပုံလေးတစ်ပုံ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ဖွေးဖွေး
ချစ်​စရာ​ကောင်းတဲ့ မျက်​နှာ​လေးနဲ့ အနုပညာအပေါ်ထားရှိတဲ့ စိတ်ကြောင့် ချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ ​အောင်​မြင်​မှု​တွေ ပိုပိုပြီး များလာသူလေးဖြစ်​တဲ့ ​ဖွေးစိန်​​လေးက​တော့ အပြစ်​ကင်းစင်​တဲ့ အလှတရားကို ပိုင်​ဆိုင်​ထားသူ​လေးပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ လတ်​တ​လောမှာ​တော့ ​ဖွေး​ဖွေးက နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းကျော် ဒေါင်းနဲ့ Love Equation ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို အတူရိုက်ကူးနေတဲ့ သူမရဲ့ပုံလေးကို လူမှုကွန်​ယက်​မှာ ​ဝေမျှ​ပေးထားတာ ​တွေ့ရပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်နေရရင်ကို ပျော်နေတဲ့ ဒေါင်းနဲ့ဖွေးကတော့ ရှုတင်မှာ အရမ်းပျော်နေကြတာပါနော်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဒေါင်းနဲ့ ဖွေးတို့ အနုပညာမောင်နှမတွေရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဖွေးဖွေးကတော့ “ဟေ့! 🌻🌻LoveEquation MovieShoot” ဆိုပြီး ဒေါင်းနဲ့ အမှတ်တရပုံလေးတစ်ပုံကို ဝေမျှပေးထားတာပါ။
ဒါရိုက်တာ အောင်မြတ်ရိုက်ကူးမယ့် Love Equation ဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ဒေါင်း၊ ခါရာ ၊ သက်မွန်မြင့်နဲ့ ဖွေးဖွေးတို့က အဓိကသရုပ်ဆောင်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေလည်း ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ Love Equation ရုပ်ရှင် ရုံတင်ရင် အားပေးကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
ခဈြစရာကောငျးတဲ့ မကျြနှာလေးနဲ့ အနုပညာအပျေါထားရှိတဲ့ စိတျကွောငျ့ ခဈြကွတဲ့ပရိသတျတှနေဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ ပိုပိုပွီး မြားလာသူလေးဖွဈတဲ့ ဖှေးစိနျလေးကတော့ အပွဈကငျးစငျတဲ့ အလှတရားကို ပိုငျဆိုငျထားသူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ လတျတလောမှာတော့ ဖှေးဖှေးက နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ အသညျးကြျော ဒေါငျးနဲ့ Love Equation ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကို အတူရိုကျကူးနတေဲ့ သူမရဲ့ပုံလေးကို လူမှုကှနျယကျမှာ ဝမြှေပေးထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ အနုပညာအလုပျတှေ လုပျနရေရငျကို ပြျောနတေဲ့ ဒေါငျးနဲ့ဖှေးကတော့ ရှုတငျမှာ အရမျးပြျောနကွေတာပါနျော။
းခဈြပရိသတျတှအေတှကျ အရမျးကို ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ဒေါငျးနဲ့ ဖှေးတို့ အနုပညာမောငျနှမတှရေဲ့ ပုံရိပျတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ဖှေးဖှေးကတော့ “ဟေ့! 🌻🌻LoveEquation MovieShoot” ဆိုပွီး ဒေါငျးနဲ့ အမှတျတရပုံလေးတဈပုံကို ဝမြှေပေးထားတာပါ။
ဒါရိုကျတာ အောငျမွတျရိုကျကူးမယျ့ Love Equation ဇာတျကားထဲမှာတော့ ဒေါငျး၊ ခါရာ ၊ သကျမှနျမွငျ့နဲ့ ဖှေးဖှေးတို့က အဓိကသရုပျဆောငျသှားမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ မိုမိုလေးခဈြပရိသတျတှလေညျး ဒိတျဒိတျကွဲ မငျးသား၊ မငျးသမီးတှနေဲ့ ရိုကျကူးထားတဲ့ Love Equation ရုပျရှငျ ရုံတငျရငျ အားပေးကွဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
ပုရိသတွေ ရင်တလှပ်လှပ်ဖြစ်သွားစေမယ့် သူမရဲ့ အမိုက်စားကောက်ကြောင်း အလှတွေထုတ်ပြလိုက်တဲ့ နန်းသီရိမောင်
ဘူးတွေမှုတ်ပြီး ခုန်ပေါက်ဆော့ကစားနေတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုးရဲ့သားလေး Liam လေးရဲ့ အသည်းယားစရာဗီဒီယိုဖိုင်လေး
လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ဖက်ရှင်နဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်လို အပူအပင်ကင်းကင်း ပျော်ရွှင်နေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
ကယားတို့မြေ က တောင်ကွဲစေတီမှာ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်နဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ပိုင်တံခွန်